कसरी फैलियो कोरोना परीक्षण गर्न १५ हजार लाग्ने ‘फेक न्युज’? – MySansar
कसरी फैलियो कोरोना परीक्षण गर्न १५ हजार लाग्ने ‘फेक न्युज’?
हामीले फ्याक्टचेकका क्रममा यो हल्ला फैलाउनमा सरकारी समाचार एजेन्सी रासस र एक मन्त्रीको भूमिका रहेको देख्यौँ। राससको अस्पष्ट समाचारलाई अनलाइनहरुले शीर्षकमै १५ हजार भनेर लेखेपछि हल्ला व्यापक भएको थियो।
1 thought on “कसरी फैलियो कोरोना परीक्षण गर्न १५ हजार लाग्ने ‘फेक न्युज’?”
Pingback: ग्रान्डीका कर्मचारीको उपचार पाटनमा किन? कोरोना संक्रमितको उपचारका विषयमा केही पत्रकार नै भ्रममा « Mysansar